Philippines kwupụtara na agwaetiti Taal Volcano bụ 'ala mmadụ ọ bụla'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Philippines kwupụtara na agwaetiti Taal Volcano bụ 'ala mmadụ ọ bụla'
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The Philippines ugwu mgbawa ebula ụzọ kwupụta na agwaetiti Luzon bụ “mpaghara ihe ize ndụ na-adịgide adịgide,” ma ndị obodo ahụ ebiwo ma rụọ ọrụ ebe ahụ ọtụtụ iri afọ. Ndị ọrụ gọọmentị na-akpọ oku ugbu a maka iwu ka a gbasie ike ma mejuputa ya n'ọdịnihu.
Onye isi ala Philippines bụ Rodrigo Duterte kwadoro atụmatụ iji kwupụta agwaetiti Luzon, ebe obibi Volcano Taal, nke bụ 'ala mmadụ ọ bụla', na-eme ka ohere nke ndị biri na mbụ ịlaghachi ibi ndụ nke ọma kwụsị.
Duterte enwetabeghị iwu pụtara na nke a.
Ihe nkiri Drone esere na Satọde na-egosi agwaetiti ahụ dum na ihe niile dị na ya, site n'ụlọ ndị gbapụrụ agbahapụ na ụgbọ ala gaa ahịhịa, ha niile ekpuchiri akwa ntụ.
Ka ọ dị ugbu a, odeakwụkwọ ime obodo Eduardo Ano enyela ndị ọrụ obodo ahụ iwu idepụta atụmatụ ịkwaga maka ndị bi na obibi ha. Ọ rịọrọ ka hectare atọ ga-enwe ike ibizi ihe dịka ezinụlọ 6,000 a kpọpụrụ site n'àgwàetiti ahụ. Ebe nrụọrụ ahụ ga-abụ opekempe nke 17 kilomita (kilomita 10) site na ugwu mgbawa maka nchekwa nke ndị bi na ya.
Ha bi na ugwu mgbawa onwe ya nwere oghere 47. Nke ahụ dị oke egwu. O di ka ichoro gi egbe, ”Renato Solidum, onye isi ulo akwukwo ihe mmuta ugwu kwuru.
Taal Volcano na-anọgide na ọkwa nke abụọ kachasị egwu, ebe ọ malitere ịmalite na Jenụwarị 12, na-egosi ihe egwu dị nso, ala ọma jijiji na-aga n'ihu, na ọtụtụ ihe ịrịba ama na-egosi na magma ka na-arị elu n'ime ụlọ mgbawa ugwu.
Enweghị ọnwụ ọ bụla na mgbawa ahụ, agbanyeghị na-agwọla ọtụtụ narị mmadụ maka nsogbu iku ume metụtara ọrịa ash.
Phivolcs, ụlọ ọrụ nlekota na Philippines maka ala ọma jijiji, ugwu mgbawa na tsunami, debara aha opekata mpe ala ọmajiji iri na abụọ n’ime elekere iri na abụọ na Mọnde.